Cognac Na-amalite site na Mkpụrụ vaịn. Apụl Aghọọ Calvados
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Cognac Na-amalite site na Mkpụrụ vaịn. Apụl Aghọọ Calvados
Na-agbasa News Travel • culinary • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Mmanya & mmuo
ahihia 1 2
Ọ Bụghị Mkpụrụ vaịn Niile Na-aghọ Wine
Youtụlewo ụzọ ọzọ maka mkpụrụ vaịn; otu nke na-eduga na ihe ọzọ na-abụghị mmanya? You dịla njikere ikweta na ọ bụghị mmanya niile na-adị ka mmanya, ụfọdụ mmanya na-aga n'ihu na njem ha na-eme ka ha wee bụrụ ụdị brandi na mkpụrụ vaịn pụrụ iche Cognac?
Naanị otu Cognac
Ọ bụ ezie na Cognac bụ akụkụ nke ezinụlọ brandi, ọ nwere agbụrụ nke ya. E nwere ike ịchọta njirimara njirimara na ubi vaịn nke obere obodo French nke na-enye aha ya ihe ọ notedụ notedụ a ama ama: Cognac!
Cognac dị na mpaghara Charente na Charente-Maritime ebe akara ngosi French na-achịkwa mmepụta DOC na-agbaso usoro na akara akara chọrọ nke iwu nyere. Akpọrọ mkpụrụ osisi kachasị na-eme Cognac bụ Ugni blanc (aka Saint-Emilion na Trebbiano) ma ọ dịkarịa ala pasent 90 nke mkpụrụ vaịn ejiri ga-etolite na Cognac, ma ọ bụrụ na a ga-etinye akara Cognac na ngwaahịa ahụ; ma, ihe ruru pesenti iri nwere ike ịbụ site na mkpụrụ vaịn ndị ọzọ gụnyere Folignan, Jurancon blanc, Meslier St. Francois (ma ọ bụ Blanc Rame), Họrọ Montils ma ọ bụ Semillon (ọ bụrụ na ọ ga-abụ CRU).
Iji bụrụ Cognac, a ga - eme ka ihe ọyụyụ ahụ dị okpukpu abụọ na ite ọla kọpa ma mee ka ọ dịkarịa ala afọ 2 na gbọm osisi oak nke France site na Limousin ma ọ bụ Troncais. Cognac na-eto n'otu aka ahụ dị ka whiskeys na mmanya ọ bụ ezie na Cognacs na-etinye oge dị ogologo "n'elu osisi" - karịa iwu iwu kacha nta. Mgbe distillation na n'oge usoro ịka nká a makwaara ya dị ka eau de vie.dor, akụkụ nke Armada Spanish (ọ dara n'ụsọ oké osimiri Normandy na narị afọ nke 16). Gụ akụkọ zuru ezu na WINES.TRAVEL.